I-BIA-R - Ibhethri lase-Italy le-ADHD - Kubuyekezwe: isibuyekezo | Ukuqeqeshwa kwengqondo
I-BIA-R - Ibhethri lase-Italy le-ADHD - Kubuyekezwe: ukubuyekezwa
I-BIA ibhethri lezivivinyo zokuhlola ukusebenza kwengqondo okuvame ukuncipha ezinganeni nakubantu abasha abanokusilela kokunaka. Ake sibheke ubufakazi ngokuningiliziwe futhi sibheke amandla nobuthakathaka.
Ukwahlulela ngegama, i-BIA-R kufanele ibe inguqulo ebukeziwe yenguqulo yangaphambilini ye- BIA (okwedlule sibuyekezile); yilokhu futhi okuphakanyiswayo nasendaweni efanayo yendlu yokushicilela, lapho uchungechunge lwezivivinyo esesizolubuyekeza luchazwa njenge- "The okusha uhlelo kuvuselelwe webhethri lase-Italy le-ADHD ".
Kodwa-ke, ukuvuselela izivivinyo namabhethri wokuhlola ngokuvamile kudinga ukuthi lokhu kube, empeleni, kuvuselelwe, iguquliwe, yathuthukiswa ... noma, okungenani, ukuthi ivela kuyo kubuyekezwe ukulinganisa. Ngeshwa, cishe akukho kulokhu okwenzeka ku-BIA-R: ibhethri liqukethe izivivinyo ezifanayo eziyi-7 nemibuzo efanayo yemibuzo ekhona enguqulweni engaphezulu kweminyaka eyi-11, nangokulinganiswa okufanayo.
Theumehluko kuphela okubalulekile ukwengezwa kwesivivinyo sokuhlola ukuvuselelwa kwememori yokusebenza; lokhu kuhlolwa, kepha, akukona okwenziwa yi-BIA-R kuphela: sekuvele kushicilelwe kumagazini (kufana ngokuphelele, kufakwa ukulinganiswa) futhi kungathengwa ngama-euro ayi-8 kuphela (lokhu yi isixhumanisi).
Uma unenguqulo yakudala ye-BIA, ukuze ube nohlobo "olubukeziwe" kwanele ukuthenga ubufakazi I-CO-TT yokuvuselela imemori esebenzayo esikhundleni sokuchitha ama-euro ayi-113 ukuthenga lonke ibhethri futhi. Uma ubhekisisa, uma unentshisekelo ezivivinyweni eziqukethwe yi-BIA-R futhi ungenalo uhlelo lwangaphambilini, kunjalo eshibhile ukuthenga inguqulo yakudala (kubiza ama-euro ayi-10 ngaphansi ku- Amazon) bese ungeze isivivinyo esingeziwe ngokwehlukana (njengoba kushiwo, kubiza ama-euro angama-8).
Ngakho-ke njengoba ihlale ingashintshi ngokuqhathaniswa neyokuqala, kwi-BIA-R ukucatshangelwa okufanayo okwenziwe kunguqulo yangaphambilini ye BIA: kuyibhethri lezivivinyo zokuhlola imisebenzi yokuqonda evame ukuntula ezinganeni nasebantwini abanenkinga yokunakwa. Ngokuqondile, kukhona uchungechunge lwezivivinyo zokuhlola izinto ezahlukahlukene ezihlobene ne- Attenzione e imisebenzi ephezulu. Ngaphezu kwalokhu, amaphepha emibuzo enziwa atholakale kudokotela ukuze ahlole umbono wokubuka wesifundo esihloliwe, abazali nothisha.
Lawa amathuluzi akhona ebhethri:
1 - Ukuhlolwa Kwamaxoxo
Ukuhlolwa okubandakanya ukusetshenziswa kwe ukunakekelwa okuqhubekayo, ukukhetha nokukhubaza ukusabela kwezimoto. Ingathathwa njengovivinyo lwe-Go-no-Go futhi ilungele abantu abaneminyaka ephakathi kwemi-5 neli-11 ubudala.
2 - Ukuhlolwa Kwokubheka Ukucwaninga
Ukunakwa kokuhlolwa yisilinganiso esilinganisa i-ukunakwa okugciniwe okuqhubekayo futhi siqukethe ukubala kusethi yemisindo ehlukahlukene ngezikhathi ezithile ezingajwayelekile. Kukalwa abantu abaphakathi kweminyaka emi-5 ne-11.
I-3 - I-Numerical Stroop Test
Isivivinyo sokuphendula sokuzenzakalelayo esizenzakalelayo (kususelwa kumphumela we-Stroop). Iwusizo kubantu abaneminyaka ephakathi kuka-6 no-11.
I-4 - Ukuhlolwa Kokunye Kokuqedwa Komshini Ohlukile
Ngenye isivivinyo sokuvimbela kepha kulokhu impendulo ukuthi ivinjelwe ingeyohlobo lolo ngamazwi. Ukuhlolwa kuqukethe ukugcwalisa uchungechunge lwemisho ukugwema amagama angavunyelwa ukuzisebenzisa. Ikalwa kubantu abaneminyaka engu-6 kuye kweli-11.
I-5 - I-Verbal Strategic Memory Test
Kungumhlola ophenya ukuthi ingane inekhono elingakanani hlela ulwazi ngosiko ukuthi igcinwe. Hlaziya ikhono lokukhumbula eliphelele, ukucubungula imininingwane, ukuvimbela imininingwane engafanele nokusetshenziswa kwamasu wokufunda. Ingasetshenziswa nezingane kusuka eminyakeni engu-6 kuye kweli-11.
I-6 - ukuhlolwa kwe-MF20 ne-MF14
Luhlolo olwenzelwe ukuhlola i ukulawula impendulo futhi iqukethe ekuseshweni kwesithombe esiqondisiwe phakathi kweziphazamisi ezi-5. Zilungele izifundo eziphakathi kweminyaka engu-5 nengu-13 ubudala.
I-7 - Ukuhlolwa kwe-CP
Kuyisivivinyo esidinga kakhulu ukunakekelwa okuqhubekayo e abakhethayo futhi idinga ukusesha okuqondiwe phakathi kweziphazamiso eziningi. Ingasetshenziswa nabantu abaphakathi kweminyaka engu-7 no-13 ubudala.
8 - Ukuhlolwa kwe-CO-TT kokuvuselela inkumbulo okusebenzayo
Kuyisivivinyo esidinga kakhulu ukugcina nokuphatha imininingwane kwimemori yokusebenza. Ingasetshenziswa nabantu abaphakathi kweminyaka eyisithupha kuya kwengu-6 ubudala.
I-9 - SDAI, SDAG ne-SDAB esikalini
Zenzelwe isikali ukukala ubukhulu nobuningi be ukuziphatha okuyinkinga kwesifundo esihloliwe, ngokubheka othisha, abazali kanye nengane uqobo.
10 - Izitebhisi ze-COM
Amaphepha emibuzo wokuhlola i nezindaba okuvame ukwenzeka ku-comorbidity ADHD.
Ukuhlolwa kwexoxo Ukuqina, ukunakwa okukhethiwe kanye nokuvinjwa kokuphendula imoto Iminyaka engu-5-11
Ukuhlolwa Kwokubheka Kwezimali Ukunakwa okugciniwe okugciniwe Iminyaka engu-5-11
Ukuhlolwa kwe-Numerical Stroop Ukuvinjwa kokuphendula okuzenzakalelayo Iminyaka engu-6-11
Ukuhlolwa Kokunye Kokuqedwa Kwemibhalo Ukuvinjwa kwempendulo yomlomo Iminyaka engu-6-11
I-Verbal Strategic Memory Test Ukukhunjulwa ngokuphelele, ukucubungula imininingwane, ukuvimbela imininingwane engafanele, ukusetshenziswa kwamasu wokufunda Iminyaka engu-6-11
Ukuhlolwa kwe-MF20 ne-MF14 Ukulawulwa kokuphendula okuthonyayo Iminyaka engu-5-13
Ukuhlolwa kwe-CP Ukunakwa okugcinakalayo nokukhethiwe Iminyaka engu-7-13
Ukuhlolwa kwe-CO-TT kokuvuselela imemori yokusebenza Ukuvuselelwa kwememori yomsebenzi Iminyaka engu-6-14
Izikali ze-SDAI, SDAG, SDAB ne-COM Izinkinga zokuziphatha eziyinkinga nezinkinga ezihambisana ne-ADHD
Iziphetho: amandla nobuthakathaka
Uma usuvele ungumnikazi wenguqulo yangaphambilini ye- BIA, le nguqulo "entsha" ayinakho ukufaneleka okufanelekile, kubuye kubhekwe ukuthi isivivinyo "esisha" kuphela esingathengwa ngokwehlukana ngama-euro angama-8 kuphela.
Uma ungenayo i- "yakudala" i-BIA, izinzuzo ziyafana ncamashi njengoba sezibaliwe ku ukubuyekeza kwangaphambilini.
Amasampuli wokumiswa kwezivivinyo ezahlukahlukene ze-BIA-R ahlala efanayo nenguqulo yangaphambilini ngakho-ke kutholakala amaphutha afanayo: inombolo encishisiwe, ukungabi nokuhlolwa kwe- ezinye izingxenye ezibaluleke kakhulu emkhakheni weziphathimandla zokunaka, ikakhulukazi ukunakwa okuhlukene, ukunakekela okuhlukile nokuhlela (nayi i-athikili mayelana nokuhlolwa ukuhlola imisebenzi yesikhundla).
Ngomqondo kungasiza ukuqeda ukuhlolwa ngezivivinyo ziphi zona Ukuxhumana Okuhleliwe (CAS) noma i- Trail Ukwenza Uvivinyo, lo UMbhoshongo waseLondon nezinye izivivinyo ze I-BVN.
Ngaphezu kwalokho, izindleko zibonakala ngokweqile ukukhishwa kabusha kwebhethri okuqala ukuguga nokuntuleka kuzibuyekezo ezinkulu.
Konke kukho konke I-BIA-R munye ithuluzi elincane noma elingenalo nhlobo uma usuvele unayo inguqulo edlule.
Uma usafuna ukuthenga, sincoma i-e-commerce enesistimu yokubuyisa ephumelelayo ngoba amathuba okudumazeka (ikakhulukazi uma usuvele ungumnikazi we-edishini endala) aphezulu kakhulu.
Thenga i-BIA ku-Amazon
I-BIA-R - Ibhethri lase-Italy le-ADHD - Kubuyekezwe: ukubuyekezwa2021-10-042021-10-04http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/10/bia-r.jpg200px200px
Amasu Okuthuthukisa Ukufunda: Yikuphi Okuphumelela Ngempela? Ingxenye 2Ukufunda, Izindatshana, Imemori, Indlela Yokufunda, I-Neuropsychology